Erayada loogu talagalay Instagram: sida loo beddelo sheekooyinka Instagram iyo in ka badan | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | shabakadaha bulshada
Koontadayada 'Instagram' haddii aan ku daryeelno emojis iyo xiriiriyeyaasha waan uga tagi karnaa si aad u wanaagsan, laakiin haddii aan u isticmaalno xarfaha Instagram, kuwa gaarka ah, waxaan siin karnaa taabasho gaar ah oo shakhsi ahaaneed si aan uga soocno kumanaan kale.
Waxaan ku tusaynaa adiga noocyada kala duwan ee xarfaha asalka ah in aad isticmaali karto iyo sida aan "dhajin karno" font-kaas si ay ugu muuqato koontadayada 'Instagram' qaabkan ayaa ah kan ugu wanaagsan saaxiibbadeen iyo asxaabteena.
1 Codsiyada in la beddelo xarfaha on Instagram
1.1 Fariimaha qabow ee loogu talagalay Instagram
1.2 Fonts Cool - Qoraal qabow oo macaan
1.3 Fariimaha qabow ee loogu talagalay Instagram
1.4 Generator Qoraalka Qoraalka - Farriimaha farta
1.5 Qoraal Casri ah
2 Sida loo beddelo font-ka sheekooyinka Instagram
2.1 Iyada oo loo marayo barnaamijka Instagram laftiisa
2.2 Via Animoto
2.3 Iyadoo loo marayo Adobe Spark
Codsiyada in la beddelo xarfaha on Instagram
Waxaa jira qalab taxane wanaagsan oo awood u leh in lagu beddelo xarfaha Instagram. Runtii waan sameyn karnaa nafteena nuqul ka soo guurinta degel internet oo ku dhajineyno astaanteenna shaqsiyeed Had iyo jeer ka taxaddar in markaan dib u soo roginno bogga ay ku sii socon doonto isla qorista iyo in astaamaha qalaad aysan muuqan. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad ka tijaabiso kombuyuutarka, maadaama ay mararka qaarkood dhibaatooyin ku keeni karto nooca desktop-ka, halka nooca mobiilku uusan sameynin.
Waxaan ku siin doonnaa liiska barnaamijyada si aad u beddeli karto qaabka astaantaada. Dhab ahaan, Ka sameynta kombiyuutarka ayaa adiga kuu fiican haddii aad u isticmaasho isticmaalka taabashada ama jiirka. Waxaan kuu soo bandhigi doonaa barnaamijyada ugu fiican ee lagu beddelo xarfaha Instagram.
Fariimaha qabow ee loogu talagalay Instagram
Barnaamijkan waa midka leh dhibcaha ugu fiican iyo midka sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan ay ku heleen bulshada isticmaaleyaasha Instagram. Haddii aad rabto noocyo kala duwan oo far ah, waxaad ku heli doontaa barnaamijkan, maadaama ay ka badan tahay 140 nooc oo gaar ah. Iyada oo taxanaha taxanaha ah, marka laga reebo sameynta muuqaal shaqsiyeed si wanaagsan loo shaqsiyeeyo, waxaad ku abuuri kartaa muuqaallo farshaxan iyo emoji ah adigoo isku daraya noocyada.
Noocyo gaar ah waxay ku saleysan yihiin Unicode waxaana loo isticmaali karaa barnaamijyada kale ee fariimaha la isugu diro sida emaylka. Inay adeegsato Unicode waxay ka dhigan tahay inay taageerto barnaamijyada waaweyn ee hadda jira: Android iyo iOS. Kaliya waxaad u baahan doontaa inaad ku qorto farriinta oo aad nuqul ka sameysato. Kadib waxaad aadeysaa Instagram oo ku dheji astaanta ama xitaa daabacaad.
Xaqiiqdii, barnaamijkani wuxuu kufiicnaan karaa isticmaalka joogtada ah ee Instagram. Haddii aad rabto inaad qorto faallooyin, daabacado ama taariikh nololeed, waad awoodi kartaa wakhti kasta, maadaama waayo-aragnimada ay bixiso ay ka badan tahay kaamil ahaan. Waxaad ku haysataa Android.
Ku soo dejiso Android - Fariimaha qabow ee loogu talagalay Instagram
Fonts Cool - Qoraal qabow oo macaan
Waxaan haynaa barnaamijkan labadaba Android iyo iOS, waana mid ka mid ah kuwa helay dhibcaha ugu badan. Waan la simi karnaa tii hore, markaa waxay noqon doontaa arrin dhadhan iyo waaya aragnimo leh. Waxaan had iyo jeer kugula talineynaa inaad kahor isku daydo ka dibna aad go aansato, maadaama midkood uu kuugu fiicnaan karo inaad wax soo saar ku sameyso waqti yar.
Barnaamijkani waa aalad u rogeysa qoraalka caadiga ah mid si fiican loo qaabeeyey iyo sidoo kale taasi waxay naga caawineysaa abuuritaanka astaamahaas qabow. Waxa ay iyadu laf ahaanteedu tahay curiyaha waraaqda farshaxanka. Waad isticmaali kartaa dhammaan noocyada shabakadaha, xitaa WhatsApp.
Kaliya waa inaad qortaa qoraalka, dejiso qaabka oo aad nuqul ka sameysataa si aad ugu qaadatid barnaamij kale oo aad ugu dhejiso.
Ku soo dejiso Android - Fonts Cool - Cool Caannimo Caan Ah
Ku soo dejiso iPhone - Fonts Cool Stylish Fancy Cool Generator Text
Waxaan sidoo kale haynaa barnaamijkan labada barnaamij. Laakiin arinta qosolka badan ayaa ah on macruufka leeyahay dib u eegista fiican iyo qiimeynta bulshada. Sida labada kale, waxay mas'uul ka tahay u beddelashada qoraalka caadiga ah noocyada kala duwan ee qaababka qoraalka.
Waxay u shaqeysaa si isku mid ah: waxaan qornaa, koobiyeeynaa oo dhajinaa shabakadda bulshada ee la doortay. Mid ka mid ah curyaamiinteeda, oo waliba ku dhaca nooca loo yaqaan 'Android', ayaa ah inay mararka qaarkood ka codsato adeegsadaha inuu booqdo websaydhka. Maxaa lagu wareeri karaa.
Ku soo dejiso iOS - Cool Fonts ee Instagram
Generator Qoraalka Qoraalka - Farriimaha farta
Barnaamijkaan waa kaliya waxaa loogu talagalay jiilka qoraalka unicode, taas oo macnaheedu yahay inaad ku heli karto noocyo fara badan oo noocyo ah, calaamado dhif ah, qurxin iyo fariimo ku kaydin karto sir. Waxaa si fudud loogu heellan yahay soo saarista qoraalka, markaa wax badan kama heli doontid.
Dabcan, waxay noqon doontaa caawinaad weyn in lagu daro qoraalka qaabka weyn ee taariikh nololeedka, Sheekooyinka Instagram, farriimaha ama qayb kasta oo ka mid ah barnaamijka Instagram oo aad ku qori karto. Looma heli karo waddamada oo dhan, markaa fiiri haddii aad rakibi karto.
Ku soo dejiso Android - Farriimaha Qoraalka Farta Qoraalka Farta
Qoraal Casri ah
Waxaan haynaa barnaamijkan ku saabsan Android iyo iOS iyo xitaa waxay noo adeegi doontaa inaan qoraalka si toos ah ugu darno codsiyada kale sida WhatsApp. Waxa kale oo ku jira noocyo badan oo noocyo kala duwan ah, xulashooyinka mawduuca ah, iyo astaamo dhif ah.
Fudud oo aasaasi ah, laakiin aad u faa'iido badan qadarka xulashooyinka aad haysato. Waxyaabaha kale ee xiisaha leh ayaa ah inaan ku hayno labada barxad, marka haddii aad haysatid Ipad iyo qalab Android ah, haddii aad la qabsato, waxaad marwalba u adeegsan doontaa inaad ku abuurto qoraalladaas gaarka ah ee loogu talagalay Instagram.
Ku soo dejiso Android - Stylish
Ku soo dejiso macruufka - Stylish
Sida loo beddelo font-ka sheekooyinka Instagram
Sheekooyinka Instagram Iyagu waa kuwa ugu badan waana inaad fiirisaa hareerahaaga markaan raacno tareen, ama bas ku aadno magaalo weyn. Qof kastaa wuu u adeegsadaa oo u ciyaaraa si uu u arko inta noloshiisa ka mid ah asxaabtiisa, asxaabtooda, maahan sidaas saaxiibbada iyo kuwa raacsan ee ay wadaagaan
Iyada oo loo marayo barnaamijka Instagram laftiisa
Waanu ku barinaynaa sida loo beddelo font-ka sheekooyinka Instagram laga bilaabo barnaamijka laftiisa. Maaddaama aan wajaheyno ikhtiyaarka ah inaan awoodno inaan soo dejino fiidiyow tifaftiran oo ku jira barnaamijka wax-ka-beddelka, sida Adobe Premiere CC, ama xitaa kombuyuutarkeena oo leh mid ka mid ah barnaamijyada ugu badan ee tafatirka, waxaan marka hore ku bilaabaynaa xulashada ugu fudud. Kadibna waxaan ku tusineynaa barnaamij aad wax kaga beddeleyso moobilkaaga oo aad markaa ku shuban karto.
Marka hore waxaan fureynaa Sheekooyinka Instagram.
Waxaan soo gelineynaa sawir, mid cusub ayaan sameynay ama waxkastoo ...
Guji astaanta qaybta kore ee midig qoraalka.
Waxaan qornaa qoraal.
Hadda dhagsii dusha sare, midig ee bartamaha si aad uga beddesho 5 nooc oo kala duwan oo ay Instagram bixiso: mid caadi ah, mid casri ah, mid cusub, mid wax qora iyo mid dhiiran.
Waxaan horey uheysanay xarfahayaga oo leh nooc gaar ah oo caawiya sumadeena shaqsiyadeed ama shirkada aan ka shaqeyneyno.
cunt Animoto waxaan heli karnaa xulasho ballaaran oo ah 36 nooc Kuwaas waxaa ka mid ah calligraphic, xarrago, serifs, sans, bold, ganaax iyo kuwa kaloo badan. Waxaan wajaheynaa tifaftire fiidiyow ah oo caan ah oo aan u adeegsan karno ujeedooyin kale, laakiin tayadiisa weyn ayaa ah inay horeyba ula timid qaabka Sheekooyinka Instagram si ay awood ugu yeeshaan inay ka sameystaan ​​moobiilkeena; Taasi waa, waxaan ka tagi karnaa kombuyuutarkeena si aan u abuurno sheekooyinka Instagram ee saxda ah.
Waxaan marki ugu horreysay soo dejinay Animoto oo loogu talagalay Android, in kasta oo ay tahay in la sheego in aan laga helin waddamada oo dhan.
Wixii macruufka ah waxaad halkan ku leedahay isku xirka App Store: ku soo dejiso App Store
Waxaan u doorannaa qaab sheeko oo waxaan soo dhejineynaa sawir ama muuqaal.
Waan beddeli karnaa midabka iyo waxyaabaha kale ee astaanta, sumadda iyo waxyaabo kale oo badan.
Waxaan kudaraynaa qoraal waxaanan kala dooran karnaa noocyada noocyada kala duwan sida Montserrat, Roboto, Lato, Aleo Bold iyo kuwa kaloo badan.
Waxaan bedeleynaa midabka waxaanan diyaarin doonnaa farta la beddelay ee loogu talagalay Sheekooyinka Instagram
Iyadoo loo marayo Adobe Spark
Barnaamijka Adobe si loo abuuro nuxur fara badan oo loogu talagalay shabakadaha bulshada Way ka badan tahay kaamil. Waxaan leenahay laga heli karaa labada Android sida macruufka ah, sidaas darteed waxaad waayo-aragnimo isku mid ah ka heli doontaa moobiil kasta.
Waxaan raaci doonnaa isla talaabooyinka Animoto. Taasi waa in la yiraahdo, waxaan xulanaa shaxanka Sheekooyinka 'Instagram', waxaan dooran karnaa sawirka waxaanna isticmaali karnaa noocyo fara badan oo noocyo ah oo Adobe Spark uu haysto. Sida oo kale waxaan isticmaali karnaa qaabab, saameyn, midabbo iyo waxyaabo kale oo badan. Waa arrin la tijaabiyo barnaamijyada kala duwan oo la doorto midka ku habboon qaabkeenna ama waxa aan raadineyno.
Soo dejiso Adobe Spark: on Android/ macruufka
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » shabakadaha bulshada » Ereyada Instagram